FESTIVAL SOBAHYA : Nankalazaina nandritra ny efatrandro tao amin’ny kaominina Katsepy
Zavakanto ara-kolotoraly sy kolontsaina ary ny fanatanjahan-tena no nameno ny fandaharam-potoana nandritra ny fanatanterahana ny andiany faha dimy amby folo ny "Festival Sobahya". 30 septembre 2019
Nampisongadina ny fomba amam-panaon-drazana sy ny hitahirizana ny kolontsaina mampiavaka ny faritra Marambitsy no antom-pisian’izao hetsika izao. Sobahya, izay midika ho lamba fitafin’ny andriana Antalahotsy tany amin’iny faritra Marambitsy iny, hoy andriamatoa Sojay Bachir Adam, ray mpiahy sady nipoiran’ity hetsika ity tao Katsepy.
Ny faritra rehetra, hoy izy dia samy mampisongadina ny fomba amam-panaon-drazany avokoa, koa rariny raha ankalazaintsika isan-taona ny Sobahya, izay kitamby na koa sikina nitafian’ny andriana hoy hatrany ny fanazavany. Tsy nianona tamin’ny fampisehoana ny fiatafy sakalava Antalahotsy ihany ny hetsika fa nampirantiana tamin’ny trano heva tao Katsepy koa ny nahandro sakalava sy ny randrana mampiavaka iny faritra iny taorian’ny lanonam-panokafana.
Karazany telo, hoy ny mpahay tantara ny karazan-damba nampiavaka ny sakalava Marambitsy, dia ny deboany sy Sobahya, izay mbola hita eny amin’ny mpivaro-damba hatramin’ity anio ity, raha ny karazan-damba dalany kosa no efa tsy misy intsony amin’izao fotoana. Koa ny Sobahya no nofinidin’ireo sojabe mpanorina ny hetsika hasongadina mandritra ny fanatanterahana ity hetsika iray ity. Tamin’ny taona 2013 no nanomboka ny " festival Sobahya", ary andiany faha dimy amby folo no notanterahana ny 12 ka hatramin’ny 15 septambra teo tao amin’ny kaominin’i Katsepy io. Mpandihy vakodrazana maromaro no nandoko ny hetsika ny antoandro ny zoma 13 septambra nandritra ny fanokafan’ny manam-pahefana io festival io, izay notarihin’ny prefen’i Mahajanga sy ny lehiben’ny Faritra Boeny, ny lehiben’ny distrikan’i Mitsinjo ary ireo solombavambahoaka vitsivitsy tonga teny an-toerana.
Nitohy tamin’ny fitsidihana ny tranom-bakoka misy ny rakitry ny ela ho an’ny foko sakalava ny Antalahotsy ny fanokafana ofisialy, ary alim-pandihizana nohafanain’i tarika Tsiliva no namaranana io andro faharoa io.
Fitaterana an-dranomasina tamin’ny alalan’ny bac Boeny mamaimpoana na bojo mandroso sy miverina no tolotra nifanankalozan’io kaoperativa mpitrandraka ny zotra an-dranomasina io tamin’ny Faritra Boeny mpikarakara ny hetsika nandritra ny fotoam-panokafana ny festival ihany. Raha vao nikatona ny ridao ny alahady 15 septambra tolakandro dia efa hanomboka hiverina an-databatra boribory sahady ireto kaomity mpikarakara hanomana ny festival Sobahya ny amin’iny taona ho avy iny, satria somary vitsy ny fahavitrihan’ireo mpitsidika tonga teny Katsepy tamin’ny fotoam-panokafana. Na izany aza dia tonga nisaotra ireo olona namaly ny fanasana avy aty Mahajanga sy ireo faritra manodidina i Michou, solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’i Mitsinjo, izay vao sambany no nandray an-tanana ny fikarakarana taorian’ny nahavoafidy azy tamin’izany toeram-boninahitra izany. "Kolontsaina voajanahary miatrika ny tontolo iainana" no lohahevitra nisaloran’io " Festival Sobahya" andiany faha dimy amby folo natao tao Katsepy io.
Nampitondraina anarana lamba
Ny sobahya, ho an’ny Sakalava Antalahotsy Boeny, dia lamba manana ny lanjany sy ny hasiny, entin’ny ampanjaka na taranak’ampanjaka mianjaika, indrindra mandritra ny fety na lanonana manetriketrika. Ny sobahya dia karazan’ny antsoina hoe sikina na kitamby, miloko mena sy volomboasary na volom-parasy. Ireo mpivarotra arabo no nitondra io karazan’ny lamba io, tamin’ny taon-jato faha14, taty amin’ny faritra andrefan’i Madagasikara.
Manan-danja, tahaka ny lamba arindrano na lamba landy, izay ampiasain’ireo taranak’ampanjaka avy any amin’iny faritra afovoan-tany iny, ny sobahya. Ny Antalahotsy kosa dia ny arabo nifamezivezy tao amin’ny lakandranon’i Mozambika ka nifampiraharaha ara-barotra tamin’ny sakalava efa nonina tao. Nametraka "comptoirs" izy ireo ary nifanambady tamin’ny sakalava tao ka niteraka ny sakalava Antalahotsy. Ny loholona Bachir Soudjay izay sakalava antalahotsy sady akademisianina ihany koa no namorona ny festival sobahya sy nametraka ny anarany 16 taona lasa izay. Efa andiany faha15 ny natao ny faran’ny herinandro teo satria nisy roa taona tsy nisian’ity festival ity. Mbola tsy mahavelon-tena izy ity hatreto fa ny faritra no mitady famatsiam-bola ahafahana manatanteraka azy.
Manana ny maha izy azy izay tokony hasandratra iny faritra Matambitsy iny ka ny hampivoirana ny kolontsaina any no tena atao. Izany no nahatonga ny sampan-draharaham-paritry ny kolontsaina sy ny vakoka eto Mahajanga sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy, tsy mitsahatra manohy ny ezaka napetraky ny fitondram-panjakana eo amin’ny fanomezana hasina ny kolontsaina malagasy. Teraka tamin’ny taona 2003 ny hetsika kolontsaina Sobahya ka ao Katsepy - renivohitry ny Sakalava Antalahotsy sady varavaran’i Marambitsy - no anatanterahana azy isan-taona.
Nasaina manokana ny « danse du dragon »
Na dia miompana tanteraka amin’ny kolontsaina sakalava Antalahotsy aza ny sobahya, dia nasain’ny ben’ny tanàna sy ireo mpikarakara manokana ireo orinasa sinoa miasa sy monina any an-toerana handray anjara amin’ny fampisehoana ihany koa ny kolontsain’izy ireo ka nangatahan’izy ireo tamin’izany ny fampisehoana « danse du dragon ». Namaly ny antso ny orinasa Longde ka niantso ny mpianatry ny Institut Confucius eto Mahajanga nanao fampisehoana ireo kolontsaina sinoa, nandritra ny fanokafana ny festival sobahya ny zoma teo. Dihim-behivavy sy hira no natolotry ny zazavavy ary « danse du dragon » kosa no nataon’ny tovolahy. Nahaliana ny olona tokoa izy io satria sambany no nahitana zavatra hafa afa-tsy dihy sakalava ny festival Sobahya. Anisany milin’ny toe-karena ao amin’ny faritra Marambitsy, distrikan’i Mitsinjo iny ny orinasa ouest sucre na complant mpamokatra siramamy izay tantanan’ny sinoa. Ho avy ihany koa ny Longde Group hanao fambolem-bary amin’ny tany midadasika sy fiompiana ihany koa, ary mbola sinoa ihany koa no tompony sy mitantana azy. Anisany niteraka olana teo aloha ny tsy fitovian’ny kolontsaina ka mampisy tsy fifankazahoana matetika. Mba hialana amin’izany dia misy ny fampianarana teny sinoa ny tanora ao Namakia ka efa maro no mahay ary lasa mpandika teny na manao asa hafa ary mora mahazo asa amin’ity orinasa ouest sucre ity. Misy tokoa ny misafidy ny hanohy fianarana any amin’ny Institut Confucius any Antananarivo ary mamarana ny fianarany any Chine. Teny tenenin’ny olombelona 2 miliara mahery ny teny sinoa. Na ny tandrefana aza dia efa mihazakazaka mianatra azy satria tsena lehibe i Chine. Manana fomba hafa ihany koa izy ireo ampianarana ary mampivelatra izany kolontsainy izany. Miara-miasa amin’ny firenena maro izy ireo ary mampahafantatra hatrany ny kolontsaina misy ao aminy, satria ny zava-tsy fantatra hono maha valalanina ihany. Efa nandritry ny 30 taona mahery no nisy mpianatra Malagasy nalefa nianatra any Chine. Anisany nianatra tany ny mpamorona sy mpitantana ny Institut Confucius ankehitriny. Raha ny sehatra ara-toekarena no efa ifaneraseran’ny Malagasy sy ny sinoa hatrizay dia sambany no nisy sehatra ara-kolontsaina kosa teto Boeny. Naharitra 15 minitra eo ho eo ny fampisehoana natao tao Katsepy fa niantso ny olona izay efa nivoaka ny kianja indray. Liana dia liana ary nanatona akaiky mihitsy moa izy ireo hijery ity dihy mbola tsy hitany ity. Nangataka izy ireo ny mba hamerenana ity seho ity amin’ny taona ho avy.
Nangonin’i Vanessa sy Marcos